Aanaalee 3 godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni ajjeefamuun qabeenyis saamamaa akka jiru jiraattoonni himan – ዜና ከምንጩ
Aanaalee 3 godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni ajjeefamuun qabeenyis saamamaa akka jiru jiraattoonni himan
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallabggaatti namoonni nagaa hidhattootaan ajjeefamaa,buqqaafamaafi qabeeyisaanii saamamaa akka jiru jiraattonni Addis Maaladaatti himaniiru.
Addis Maaladaan jiraattoota naannawichaa irraa akka dhageessetti wiixata galgala godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Dongoroo ganda Jaartii jedhamtutti namoonni nagaa haleellaa hidhattootaatiin ajjeefamniiru jedhameera.Namoota haleellaa wiixata galgala raawwatameen ajjeefaman malees namoonni lakkoofsisaanii hinbeekmne akka madaa’an ibsameera.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa irra deddeebiidhaan namoota nagaa irratti raawwatamuun dararamuudhaan lammiiwwan naannawicha gadi lakkisanii baqatan akka jiraniifi qabeenyisaanii qaamolee gurmaa’aniin saamamaafi gubamaa akka jiru maddoonni Addis Maaladaa eeraniiru.Qabeenyi buqaatotaa saamamaafi gubamaa kan jiru aanaa Giddaa Ayyaanaafi Limmuutti akka ta’e hubatameera.
Naannawicha kanaan duras haleellaafi saamichi hidhattootaa raawwatamaa akka ture kan yaadatan maddawwn Addis Maaladaa tibbana qabeenya namoota buqqa’anii saamuufi gubuu akkasumas namoota hanga ammaatti hin buqqaane iddoo jireenyaa buqqisuun babala’atee itti fufaa jira jedhaniiru.Haleellaawwan gara garaa kanaan dura raawwatamaniin jiraattoonni aanaa Limmuufi Giddaa qabeenyasaanii baqatan waqtiin ammaa kan qonnaa waan ta’eef naannawichi hidhattootaan eegamuun gara naannawa isaaniitti akka deebi’aniif yoo gaafatanis hinmilkoofne jedhameera.
Lammiiwwan buqqa’an yeroon qonnaa darbuusaatiin dura deebi’uuf fedhii yoo qabaatanis haleellaan tibbana raawwatameefi gochi saamichaa mudate waan yaadaniin faallaa akka jalaa ta’e eerameera.
JIraattonni naannawichaa sababa haleellaatiin buqqa’aniifi qabeenyisaanii jalaa saamameefi gubame yaadasaanii Addis Maaladaaf kennan rakkoon kun kan mudate humnoonni tasgabbii naannicha akka hinjirre erga beekamee booda jedhaniiru.Humni tasagabbii mootummaa naannicha ture gadi lakkisee erga ba’ee booda gareewwan hidhatan qabeenya buqqaatotaa saamuun gubuurra darbuudhaan gurmaa’uudhaan lafa qonnaan bultootaa qotachaa jiru jedhameera.
Karaa birootiin rakkoo tasgabbii uumameen qonnaan bultoonni manaafi qabeenyasaanii gatuudhaan baqatan mootummaan akka isaan hinfudhanneefi deeggarsa namoomaa argachaa akka hinjirre Addis Maaldatti himaniiru.
Godina Wallagga Bahaatti sababa haleellaa irra deddeeniidhaan hidhattootaan raawwatamuun qabeenyasaanii gatuudhaan qonnaan bultoonni baqatan gara iddoo fooyya’aa qabutti yoo baqatanillee qaamni mootummaa isaan keessummeesse akka hinjirredha kan ibsan.
Wallagga bahaatti humna hidhataadhaan haleellaa irra deddeebiin raawwatameen qonnaan bultoota qayeefi qabeenyasaanii gatanii buqqa’an keessaa fagaatanii deemuu kan hindandeenye gara naannawa tasgabbii fooyya’aa qabutti baqatanis qaamni mootummaa simatee hanga yoonaatti isaan keessummeesse akka hinjirre himaniiru.Aanaa Giddaa Ayyaanaa irraa ganda Arqumbii 1,Arqumbii 2,Arqumbii 3fi Arqumbii 4 keessaa lammiiwwan buqqa’an wayita ammaa haleellaa baqachuun magaalaa Angar Guttin jiru.
Haata’u malee lammiiwwan buqqa’an simachuun qaamni mootummaa nyaataafi da’oo kennu akka hinjirre himan.Buqaatoonni magaalaa Angar Guttin jiran Addis Maaladaatti akka himanitti taanaan hanga yoonaatti tumsa hawaasaatiin da’eeffatanii jiru.
Total views : 5877009